IATA: Kakan oo aad u badan sida xuduudaha dib loo furayo
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » IATA: Kakan oo aad u badan sida xuduudaha dib loo furayo
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Xayiraadaha socdaalka ee caalamiga ah iyo kuwa gudahaba waa xeerar adag oo jahawareer leh oo xeerar leh dhex -dhexaad aad u yar.
Xayiraadaha safarka ayaa iibsaday dowladaha waqti ay kaga jawaabaan maalmaha hore ee masiibada COVID-19.
Bilihii la soo dhaafay, dhowr suuq oo muhiim ah oo horay loo xiray ayaa qaaday tallaabooyin ay ugu furayaan socotada la tallaalay.
Suuqyada markii hore la xiray, Yurub waxay ahayd dhaq -dhaqaaq hore, waxaa ku xigay Canada, UK, US iyo Singapore.
International Ururka Gaadiidka Cirka (IATA) wuxuu ku baaqay in la joojiyo xannibaadaha safarka ee COVID-19 ee sida ba'an u xannibaya soo-kabashada gaadiidka hawada. Waxay ku boorrisay dowladaha inay hirgeliyaan nidaamyo la fududeeyay si loo maareeyo khataraha COVID-19 maadaama xuduudaha ay dib ugu furan yihiin safarka caalamiga ah.
Xayiraadaha safarka ayaa u iibsaday dowladaha waqti ay kaga jawaabaan maalmaha hore ee masiibada. Ku dhawaad ​​laba sano ka dib, caqligaas ma sii jiro. COVID-19 wuxuu ka jiraa dhammaan qaybaha adduunka. Xayiraadaha safarka ayaa ah shabakado adag oo jahawareer leh oo xeerar leh dhex -dhexaad aad u yar. Waxaana jira caddaymo yar oo taageeraya xannibaadaha soohdinta ee socda iyo burburka dhaqaale ee ay abuuraan, ”ayuu yiri Willie Walsh, Agaasimaha Guud ee IATA.
Natiijooyinka imtixaanka ee rakaabka imanaya UK waxay muujinayaan in dadka socotada ahi aysan khatar ku darin dadka maxalliga ah. “Saddexda milyan ee yimid intii u dhexeysay Febraayo iyo Ogosto kaliya 42,000 ayaa tijaabiyey togan - ama in ka yar 250 maalintii. Dhanka kale, tirada kiisaska maalinlaha ah ee Boqortooyada Midowday (UK) waa 35,000 dhaqaaluhu - marka laga reebo safarka caalamiga ah - waa mid aad u furan. Dadku waa inay xor u ahaadaan inay safraan, ”ayuu yiri Walsh.
Bilihii la soo dhaafay, dhowr suuq oo muhiim ah oo horay loo xiray ayaa qaaday tallaabooyin ay ugu furayaan socotada la tallaalay. Suuqyada markii hore la xiray, Yurub waxay ahayd dhaq -dhaqaaq hore, waxaa ku xigay Canada, UK, US iyo Singapore. Xitaa Australia, oo leh qaar ka mid ah xannibaadaha aadka u daran, waxay qaadaysaa tillaabooyin ay dib ugu furayso xudduuddeeda socotada la tallaalay bisha Nofembar.
IATA wuxuu taageeraa dhaqdhaqaaqyadan wuxuuna ku dhiirrigeliyaa dhammaan dawladaha inay tixgeliyaan qaab-dhismeedka soo socda ee dib-u-furidda xuduudaha:
Tallaalada waa in loo diyaariyaa dadka oo dhan sida ugu dhaqsaha badan.
Socotada la tallaalay waa inaysan la kulmin wax caqabad ah oo ku saabsan safarka.
Tijaabintu waa inay awood u siisaa kuwa aan helin tallaalada inay safraan iyagoon karantiil lahayn.
Tijaabooyinka Antigen-ka ayaa fure u ah nidaamyada imtixaanka ee wax-ku-oolka ah oo habboon.
Dawladuhu waa inay bixiyaan kharashka imtixaanka, si aysan u noqon caqabad dhaqaale oo lagu safro.